Flexibac (Baclofen) – Online Myanmar Pharmacy
Flexibac (Baclofen) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
ဖလက်စီဘက် ဆေးသည် ကြွက်သားပြေလျော့ဆေးဖြစ်ပီး ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း ၊ ခါးနာခြင်း၊ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း ၊ အာရုံကြောအားနည်းခြင်းကြောင့်ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း များကိုကုသရန်အသုံးပြုပါသည်။
Baclofen isagamma-aminobutyric acid (GABA) agonist used asaskeletal muscle relaxant used for the relief of painful and uncomfortable muscle Spasms, Spasticity and Low Back Pain caused byavariety of conditions.
This drug has recently been studied for the management of alcohol withdrawal, however,aconclusion has not been made regarding baclofen efficacy in this condition.